Inkantolo iyona ezonquma ukuthi ubani ozohlala esihlalweni sikaZulu | Scrolla Izindaba
Inkantolo iyona ezonquma ukuthi ubani ozohlala esihlalweni sikaZulu
Celani Sikhakhane noZukile Majova
Izinkantolo nemithetho yaseNtshonalanga ibukeka izoba nezwi lokugcina mayelana nokuthi ngubani ozoba iNkosi esemthethweni okokuqala ngqa emlandweni wesizwe samaZulu.
Umbango wesihlalo sobukhosi bakwaZulu ubuwenzeka eminyakeni engaphezu kuka-300 edlule. Kodwa manje kubangwa okukhulu njengoba iNgonyama kaZulu isiqoqe imali elinganiselwa ku-R300 million.
Kodwa lokhu akubandakanyi isibonelelo sonyaka sika-R66 million esivela kuhulumeni waKwaZulu-Natali.
Ukungaxazululeki kombango wesihlalo sobukhosi sekudale uqhekeko kuhulumeni wesifundazwe.
Leli cala eliyingqophamlando lithathe izinsuku ezimbili kuleli sonto eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu.
Kuze kube manje uNdlunkulu uSibongile Zulu umaDlamini, unkosikazi wokuqala weSilo esikhotheme uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, wehlulwe kabili esicelweni sakhe sokuthi athole u-50% wemali elinganiselwa ku-R71 million yefa leSilo esikhotheme.
Uphinde wafuna ukuthi inkantolo enkulu ichithe umshado wabanye oNdlunkulu abahlanu, okubalwa noNdlunkulu ongasekho obeyibamba uShiyiwe Mantfombi MaDlamini.
IPhini likaMengameli wamaJaji ophikweni lwase-KZN u-Isaac Mjabuliseni Madondo wenqabile ukunikeza ithimba labammeli bakaNdlunkulu uMaDlamini imvume yokuthi bengeze ingxenye yokuchithwa komshado encwadini yabo yokuqala efungelwe.
Uphinde wachitha isicelo sethimba labammeli bakaNdlunkulu uSibongile, eliholwa ngu-Advocate Nigel Redman SC, ebelifuna ukuthi uMadondo ahoxe ekulawuleni icala.
Icala lesibili lifakwe amadodakazi akhe, uNtombizosuthu Duma noNtandoyenkosi, aphikisana nefa leSilo uZwelithini.
Bafuna inkantolo ivimbele iSilo esikhona manje uMisuzulu kaZwelithini ekwenzeni umsebenzi waso njengeNkosi yesizwe sakwaZulu esiphethe abantu abangu-15 million.
UJustice Madondo unomnqamulajuqu wezinsuku ezingu-15 kuphela wokuqinisekisa ukuthi isiginesha equkethwe encwadini yefa ngeyeSilo uZwelithini noma cha.
Udaba lwasezinkantolo luphoqe uhulumeni wesifundazwe ukuthi akhulule isabelomali sika-R66 million ebesihlinzekwe ngonyaka wezimali ka-2021/2022.
“Kuyilungelo lakhe ukulwela umshado abenawo neNkosi,” kusho ungoti wezamasiko uSolwazi Sihawu Ngubane waseNyuvesi yaKwaZulu-natal, ekhuluma ngoNdlunkulu uMaDlamini wasigodla sakwaKhethomthandayo.
Isizwe samaZulu naso silindele umbiko kaNgqongqoshe we-Cogta, uNkosazana Dlamini-Zuma, ozocacisela uhulumeni mayelana nokuba semthethweni kweNkosi uMisuzulu.
Umthombo wezindaba i-Scrolla, ushicilelwe yi-Olduvai Pty, ebhalise nemithetho yokuziphatha nokusebenza ngendlela efanele, ngokushicilela izindaba eziyiqiniso, ezinembayo, nezinobulungiswa. Uma singahambisani nemithetho yokuziphatha ngendlela efanele, uma kungakapheli izinsuku ezingama-20 kushicilelwe lowo mbhalo, sicela uthintane noMmeli Womphakathi ku-011 4843612, nakwi-fax ethi: 011 4843619. Ungathintana Nomphathi wamacala ku-khany[email protected] noma ufake isikhalazo kumthombo wezindaba i-Scrolla ku: www.presscouncil.org.za